29.7.2020 | 11 Business Benefits of Fiber Connectivity
Fiber-optic ဝန်ဆောင်မှုများဟာ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းကို သိထားထင်ရှားစွာ အားသာချက်များရှိလာနိုင်စေပါတယ်။
Voide-over-IP (VoIP) telephony ပါဝင်တဲ့ Fiber ဝန်ဆောင်မှုဟာ လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးတွင် သင့်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Fiber ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၁၁) ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Telecommunication Business Consultancy ကုမ္ပဏီတစ်ခု အနေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လုပ်ငန်းရှင်များက သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများထံမှ ဘာတွေကိုလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကို သိရှိထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များဟာ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေဖို့အတွက် မြန်နှုန်းမြင့်မားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်နေပြီး ထိုအရာတွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါကလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီဖက်မှ ထိုပြဿနာကိုမြန်ဆန်စွာတုန့်ပြန်မှုပြုလုပ်ပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ကိုလိုအပ်ကြပါတယ်။
Fiber-optic အင်တာနက်ဟာ အမြန်ဆန်ဆုံးဆိုတဲ့ ကြေးနီအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများထက်ပင် အဆပေါင်းများစွာပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး 5Mbps မှ 100 Gbps အထိ ရွေးချယ်စရာများစွာလည်းရှိနေပါ တယ်။ Fiber အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုအများဆုံးအချိန်များတွင် မှာတောင်မှ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွင်အင်တာနက်လိုင်းများသိသိသာသာနှေးကွေးသွားတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
လေ့လာမှုများအရ နှေးကွေးတဲ့အင်တာနက်များဟာ “ဝန်ထမ်းများရဲ့တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင် ရည်တွင် တစ်ပတ်စာခန့်ပိုမိုပြီးနောက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။“ သင့်ရဲ့ team အနေနဲ့ အင်တာနက်လိုင်း နှေးကွေးနေခြင်းကြောင့်စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်များဟာ ကိစ္စအသေးအမွှားမျှသာဖြစ်တယ်လို့ထင် မြင်ရသော်လည်း၊ ဒီအရာက အချိန်ကြာလာသည်နဲ့အမျှ သိသာလာစေမှာပါ။ သင့်ရဲ့အင်တာနက် လိုင်းဟာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်တော့မှနှောင့်နှေးမှုဖြစ်မနေစေသင့်ပါဘူး။ ဒီအရာဟာ သင့်ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ပိုမို၍စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေဖို့အကူအညီပေး နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။
၂။ Cloud သို့ဝင်ရောက်နိုင်မှု
Customer Relationship Management (CRM) tool များမှ ဒေတာအချက်အလက်များကိုသိမ်း ဆည်းနိုင်စေဖို့အထိ Cloud ဟာ app များ hosting နဲ့ အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အရေး ပါတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ ၉၆% ခန့် ဟာ ယခုအခါတွင် Cloud ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Fiber အင်တာ နက်ရဲ့ မြန်နှုန်းများနဲ့ bandwidth စွမ်းဆောင်ရည်များဟာ Cloud ပေါ်တွင်သင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဒေတာများနဲ့ application များသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဝင်ရောက်မှုပြုလုပ်နိုင်စေဖို့အတွက်အရေးပါပါ တယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ Cloud ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ရဲ့ software-as-a-service (SaaS) tool များနဲ့ အခြားသော platform များပေါ်မှတဆင့်ဝင်ရောက်မှု ပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ Customer Service ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ ဖောက်သယ်ဖြစ်လာနိုင်သူများ (သို့) ဖောက်သယ်များနဲ့ဆက်ဆံရာတွင် နှောင့်နှေးမှုများဖြစ်ပေါ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းများဟာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကို cloud ပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းမှုပြုလုပ်လာသည်နှင့်အမျှ fiber-optic အင်တာနက်ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်လို့လာနေပါတယ်။
Fiber Internet ဝန်ဆောင်မှုများဟာ Copper Internet ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့နှိုင်းစာလျှင် သိသာစွာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အားသာချက်များရှိနေပါတယ်။ Fiber ဟာ Copper ထက်ပိုမိုပြီးခိုင်မာမှုရှိ တဲ့အတွက် Fiber-optic အင်တာနက်ဟာ Copper cabling များတွင်ကဲ့သို့ ရာသီဥတုအခြေအနေ များကြောင့် ဒေတာပေးပို့မှုများကိုပျက်စီးထိခိုက်စေ (သို့) နှောင့်နှေးစေခြင်းတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Fiber ဟာ လူသားများရဲ့နှောင့်ယှက်မှုများနဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းများကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်မှု များကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီး Fiber ကြိုးများကိုဖြတ်တောက်မှုမပြုသရွေ့ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ် နိုင်ပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချ၍မရတဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများဟာ လုပ်ငန်းများအတွက် ဆုံးရှုံးရမှုများကိုဖြစ် စေနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်စီမံထားမှုမရှိဘဲ အင်တာနက်ပြတ်တောက်သွားခြင်းဟာ ဆက်သွယ်ပြောဆို မှုများနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များကိုလုံးဝရပ်တန့်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာ ဖုန်းခေါ် ဆိုမှုများပြုလုပ်ရန် (သို့) application များသို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ် ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
DSL (သို့) Ethernet over Copper များကိုအသုံးပြုထားတဲ့သမားရိုးကျ Broadband အင်တာနက် များတွင် အသုံးပြုသူက switch မှ ဝေးကွာလာသည်နှင့်အမျှ လိုင်းဆွဲအားများလျော့နည်းလာပါ သည်။ Fiber-optic များရဲ့ လိုင်းဆွဲအားဟာတော့ အကွာအဝေးအလိုက်တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျ သွားရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါလိုင်းများထက်နှေးကွေးပါတယ်။ ရုံးခန်းနေရာကျယ်ဝန်းတဲ့လုပ်ငန်း များတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွင်း ကောင်းမွန်တဲ့လိုင်းစွဲအားများကိုရရှိနိုင်တဲံအားသာချက်ကို ရရှိ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာက telecommunications room မှပိုဝေးသောနေရာတွင်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်း များအတွက်ပိုမို၍အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာအချက်အလက်များကိုပေးပို့ဖို့လွန်စွာပြုလုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းများတွင် Cable Internet Bandwidth ကိုအသုံးပြုလျှက်ရှိပါက သတ်မှတ်ပမာဏကိုမြန်ဆန်စွာရောက်ရှိသွားဖို့မှာ လွယ်ကူ လှပါတယ်။ လုပ်ငန်းများအတွက် Fiber-optic အင်တာနက်ဟာလည်း ရာနှုန်းပြည့် အကန့်သတ်မဲ့ ရရှိနိုင်တာမဟုတ်သော်လည်း Bandwidth ရရှိနိုင်မှုပမာဏဟာ ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ပိုမိုများပြားတဲ့ demand တွေ network ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာသော်လည်း မြန်နှုန်းမှာလျော့ကျသွားမှုမဟုတ်ပါဘူး။
အောက်ပါအချက်များဟာတော့ လုပ်ငန်းများရဲ့ bandwidth ပေါ်တွင်မြင့်မားတဲ့ demand တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေပါတယ်။
ရရှိနိုင်တဲ့ Bandwidth ပမာဏနည်းပါးခြင်းရဲ့လက္ခဏာများကတော့ မြန်နှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ နှောင့် နှေးမှုများနှင့် ကောင်းမွန်သည့် video အရည်အသွေးမရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဟာသင့်ကုမ္ပဏီတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ bandwidth လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော SIP trunking မှတဆင့် တယ်လီဖုန်းဝန်‌ ဆောင်မှုများ၊ ရုပ်သံအစည်းအဝေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း (သို့) cloud application များသို့ဝင်ရောက် ခြင်း များအတွက်လုံလောက်မှုမရှိပါက သင့်အနေနဲ့ fiber-optic အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သိသိသာသာကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
“Symmetric Speed“ ဆိုသည်မှာ ညီတူသော upload နှင့် download time များရှိတဲ့ အင်တာနက် connection ကိုဖော်ပြသည့်အခါတွင်အသုံးပြုသည့်အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Fiber အင်တာ နက်နှင့်ဆိုပါကသင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများဟာ တူညီသော upload နဲ့ download time များရှိတဲ့အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။
Symmetric speed ရှိနေဖို့မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသလား? ဒီအရာကလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာ တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာက အကျိုးရှိစေပါတယ်။ TechZine ရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ symmetric speed များတွင် တိုးတက်လာမှုဟာ “network များကိုအသုံးပြုသည့်ပုံစံ“ များတိုးတက်လာသည်ကိုဖော်ပြနေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ဝန် ထမ်းများဟာ ယခင်ဆယ်စုနှစ်များကဝန်ထမ်းများထက် သူတို့အလုပ်လုပ်ရာတွင် Video များ၊ ဖိုင် များကို upload ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) download ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ရခြင်း တို့ကိုပိုမိုပြီးပြုလုပ်လာကြရပါတယ်။ Symmetric Speed ရှိခြင်းဟာ အသုံးပြုသူများကို သူတို့ရဲ့ ဒေတာကွန်နက်ရှင်မှတဆင့် ပမာဏများပြားသော upload နဲ့ download များကို တစ်ပြိုင်နက်ပြု လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Latency ဆိုသည်မှာ ဒေတာအချက်အလက်များကို အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် process ပြု လုပ်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်ကြာချိန်ကိုဖော်ညွှန်းသည့်အခါတွင်အသုံးပြုသည့်အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ Fiber-optic အင်တာနက်ဟာ user များအနေနဲ့ cable internet ဥိုအသုံးပြုရာတွင်တွေ့ကြုံ ရနိုင်သည့် များစွာသော latency ပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗွီဒီယို (သို့) အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ content တစ်ခုခုကို upload (သို့) download ပြုလုပ်ရာတွင်ဖြစ်ပါ တယ်။ သင့်ရဲ့ latency ကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးရ လာဒ်များကတော့
• VoIP အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အသံအရည်အသွေး
• Cloud ပေါ်သို့ပိုမိုများပြားသော app များကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်း
• အရွယ်အစားကြီးမားသည့်ဖိုင်များကို အနှောင့်အယှက်မရှိ download နှင့် upload ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
လုပ်ငန်းသုံး cable အင်တာနက်ကို cable tapping (သို့) အခြားသော ရိုးရှင်းသည့်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပြီး Hacker များနဲ့ သတင်းအချက်အလက်ခိုးယူသူများဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ကြ ပါတယ်။ Fiber-optic အင်တာနက်ကို ထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက တော့ Fiber များကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့သာဖြစ်ပြီး ဒီအရာက လိုင်းဆွဲအားများပျောက်သွားစေမှာဖြစ် ပါတယ်။ Fiber-optic အင်တာနက်ဟာ သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကို cyber ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများရဲ့ရန်မှ ကာ ကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်ကျိုးပေါက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အကျိုးဆက်များရဲ့ကုန်ကျစား ရိတ်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 မီလီယံရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားရမယ့်သတင်းအချက် အလက်များပေါက်ကြားသွားတဲ့ကုမ္ပဏီများဟာ ငွေကြေးဆိုင်ရာအလျော်ပေးရမှုများနဲ့ စားသုံးသူ များမှ စွန့်ခွာသွားမှုများကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာများဟာ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင်ဖြစ် ပွားလေ့ရှိတဲ့ high-profile လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုများကိုသာ အသားပေးဖော်ပြတတ်ကြသော် လည်း ကုမ္ပဏီတိုင်းဟာ တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ Fiber-optic အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုသို့ပြောင်း လဲသုံးစွဲလိုက်ခြင်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့ risk အားလုံးကိုလျော့နည်းသွားစေမှာမဟုတ် သော်လည်း ဒီအရာဟာ အရေးပါတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အနှောင့်အယှက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
Broadband ကို support ပေးထားတဲ့ Copper cable Internet ဟာ electromagnetic လှိုင်းများ ရဲ့နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ ဒီအရာဟာ စက်ပစ္စည်းကြီးတွေနဲ့နီးကပ်မှုရှိတဲ့အခါ တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ Fiber Internet signal များဟာတော့ electromagnetic လှိုင်းများရဲ့‌ နှောက်ယှက်မှုကြောင့်လျော့နည်းသွားခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ အကယ်၍သင့်ရဲ့လုပ် ငန်းအဖွဲ့အစည်းဟာ telecommunication အခန်းကို အခြားသောုပ်ငန်းများနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲနေရပါက Fiber-optic အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အခြားသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများက တူညီ တဲ့နေရာတစ်ခုတွင်ရှိနေတဲ့ သင့်ရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာများ ကိုအသုံးပြုလျှက်ရှိနေရင်တောင်မှ သင့်ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားများ လျော့နည်းပျောက်ကွယ် မသွားစေရန်အတွက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ .
မြန်ဆန်သောအင်တာနက်လိုင်းရှိနေဖို့ဟာ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းစေ ရန်အတွက်လိုအပ်သည့် tool တစ်ခုအနေနဲ့ ပိုမို၍ကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ကအချက်များတွင်ပြောကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း မြန်နှုန်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းလိုက်ခြင်း ဟာ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း တစ်ပတ်စာပိုမို၍လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှုနှုန်းကိုတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ မြေနေရာအနေအထားနဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် ယုံကြည် စိတ်ချရမှုမရှိတဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုပါက သင့်အနေနဲ့နှစ်တိုင်း ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှေးကွေးသော (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချ၍မရ သော cable အင်တာနက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများဟာ Fiber ကို အသုံးပြုလိုက်ပါက ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုမို၍အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာ fiber-optic အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ကိုအသုံးပြုပါကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနဲ့လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ IT team ဟာ ပိုမိုများပြားတဲ့ application တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို Cloud ပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Fiber connection တစ်ခုဟာ ဒီနေရာများတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Software-as-a-service (SaasS), cloud storage နှင့် VoIP များအားလုံးဟာ ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်စေ ရန်အတွက် ကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းသုံးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး ထိုအရာများဟာ fiber အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကို သိသိသာသာ ပေးစွမ်းနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ HD ဗွီဒီယိုများကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ခြင်း
ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာအတွက် teleconferenceing နှင့် video conferencing များဟာ ဝန်ထမ်းများ ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်၊ marketing နဲ့ sales များပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အရေးပါတဲ့ tool များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Fiber-optic internet connection နဲ့သာဆိုလျှင် ရရှိနေတဲ့ bandwidth ပမာဏ များကို မဆုံးရှုံးစေပဲ လုပ်ငန်းများဟာ video conferencing များတွင် သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လုပ်ငန်းသုံး အထောက်အကူပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပိုမိုပြီးတိုးမြှင့်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု များမှဖော်ပြချက်အရ video conferencing တွင်ပိုမိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာခြင်းဟာ ကုမ္ပဏီများကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခြင်းစီအတွက် တစ်နှစ်လျှင်သော်၎င်း၊ တစ်လအတွင်းတွင်သော်၎င်း ကုန်ကျနိုင်သည့် ဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီတဲ့ကုန်ကျစားရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ကာ သင့်အနေနဲ့လိုအပ်မှုမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းကြောင့်ခရီးသွားလာရမှုများကိုလျှော့ချနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Fiber-Optic Internet ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရသည့်အတွက်ရရှိလာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများဟာ အဘယ်နည်း?
Fiber-optic Internet ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများဟာ မရှိသလောက်နည်းပါ သော်လည်း ထိုအရာများတွင် -
• စတင်တပ်ဆင်ချိန်တွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရခြင်း
• ပိုမိုမြင့်မားသော လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ
Fiber အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတပ်ဆင်ရန် ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစားရိတ်များနဲ့ ငွေကြေးအရရင်း နှီးမြှုပ်နှံထားရမှုများရှိနေသော်လည်း လုပ်ငန်းအတော်များများကတော့ သူတို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးရလာဒ်များကြောင့် မြင့်မားတဲ့ ROI အချိုး ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းအရွယ်အစားတိုင်းအတွက် Fiber-Optic အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်များအကြောင်းကိုပိုမိုပြီးသိရှိနိုင်ရန်အတွက် (သို့) ဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်များကိုရရှိနိုင် ရန်အတွက် Burmainternet.com ကို ယခုပဲဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံးဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်း ကျင်သူ consultant များနဲ့ စကားပြောကြည့်လိုက်ပါ။
Fiber-optic ဝနျဆောငျမှုမြားဟာ အရှယျအစားအမြိုးမြိုးရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီတိုငျးကို သိထားထငျရှားစှာ အားသာခကြျမြားရှိလာနိုငျစပေါတယျ။
Voide-over-IP (VoIP) telephony ပါဝငျတဲ့ Fiber ဝနျဆောငျမှုဟာ လုပျငနျးစီးပှားရေးဆိုငျရာ ဆကျသှယျပွောဆိုမှုမြားပွုလုပျရနျအတှကျ စှမျးဆောငျရညျအမွင့ျဆုံးအရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးတှငျ သင့ျကုမ်ပဏီအနနေဲ့ Fiber ဝနျဆောငျမှုကိုရယူသုံးစှဲခွငျးအားဖွင့ျရရှိနိုငျမယ့ျ အကြိုးကြေးဇူး (၁၁) ခကြျကိုဖောျပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဆယျစုနှဈတဈခုကွာရပျတညျခဲ့တဲ့ Telecommunication Business Consultancy ကုမ်ပဏီတဈခု အနနေဲ့ ကြှနျုပျတို့ဟာ လုပျငနျးရှငျမြားက သူတို့ရဲ့အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုပေးသည့ျကုမ်ပဏီမြားထံမှ ဘာတှကေိုလိုအပျနသေလဲဆိုတာကို သိရှိထားပါတယျ။ လုပျငနျးရှငျမြားဟာ သူတို့ရဲ့ဝနျထမျးမြား အနနေဲ့ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျကောငျးမှနျစှာအလုပျလုပျနိုငျစဖေို့အတှကျ မွနျနှုနျးမွင့ျမားသော အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုမြားကိုလိုအပျနပွေီး ထိုအရာတှငျ ပွူနာတဈစုံတဈရာရှိလာပါကလညျး ဝနျဆောငျမှုပေးသည့ျကုမ်ပဏီဖကျမှ ထိုပွူနာကိုမွနျဆနျစှာတုန့ျပွနျမှုပွုလုပျပွီးဖွရှေငျးပေးနိုငျဖို့ ကိုလိုအပျကွပါတယျ။
Fiber-optic အငျတာနကျဟာ အမွနျဆနျဆုံးဆိုတဲ့ ကွေးနီအငျတာနကျဝနျဆောငျမှုမြားထကျပငျ အဆပေါငျးမြားစှာပိုမိုမွနျဆနျပွီး 5Mbps မှ 100 Gbps အထိ ရှေးခယြျစရာမြားစှာလညျးရှိနပေါ တယျ။ Fiber အငျတာနကျကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွင့ျ အငျတာနကျအသုံးပွုအမြားဆုံးအခြိနျမြားတှငျ မှာတောငျမှ သင့ျရဲ့လုပျငနျးတှငျအငျတာနကျလိုငျးမြားသိသိသာသာနှေးကှေးသှားတာမြိုးကိုကွုံတှေ့ ရမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။
လေ့လာမှုမြားအရ နှေးကှေးတဲ့အငျတာနကျမြားဟာ “ဝနျထမျးမြားရဲ့တဈနှဈတာလုပျငနျးစှမျးဆောငျ ရညျတှငျ တဈပတျစာခန့ျပိုမိုပွီးနောကျကစြနေိုငျပါတယျ။“ သင့ျရဲ့ team အနနေဲ့ အငျတာနကျလိုငျး နှေးကှေးနခွေငျးကွောင့ျစောင့ျဆိုငျးရတဲ့အခြိနျမြားဟာ ကိစ်စအသေးအမှှားမြှသာဖွဈတယျလို့ထငျ မွငျရသောျလညျး၊ ဒီအရာက အခြိနျကွာလာသညျနဲ့အမြှ သိသာလာစမှောပါ။ သင့ျရဲ့အငျတာနကျ လိုငျးဟာ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျကိုဘယျတော့မှနှောင့ျနှေးမှုဖွဈမနစေသေင့ျပါဘူး။ ဒီအရာဟာ သင့ျဝနျထမျးမြားအနနေဲ့ ပိုမို၍စှမျးဆောငျရညျကောငျးမှနျစှာအလုပျလုပျနိုငျစဖေို့အကူအညီပေး နိုငျတဲ့အရာတဈခုသာဖွဈနသေင့ျပါတယျ။
၂။ Cloud သို့ဝငျရောကျနိုငျမှု
Customer Relationship Management (CRM) tool မြားမှ ဒတောအခကြျအလကျမြားကိုသိမျး ဆညျးနိုငျစဖေို့အထိ Cloud ဟာ app မြား hosting နဲ့ အခွားသောဝနျဆောငျမှုမြားအတှကျ အရေး ပါတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးဆိုငျရာအထောကျအကူပစ်စညျးတဈခုဖွဈပွီး အဖှဲ့အစညျးတိုငျးရဲ့ ၉၆% ခန့ျ ဟာ ယခုအခါတှငျ Cloud ကိုအတိုငျးအတာတဈခုအထိအသုံးပွုနပွေီဖွဈပါတယျ။ Fiber အငျတာ နကျရဲ့ မွနျနှုနျးမြားနဲ့ bandwidth စှမျးဆောငျရညျမြားဟာ Cloud ပေါျတှငျသငျသိမျးဆညျးထားတဲ့ ဒတောမြားနဲ့ application မြားသို့ ပိုမိုမွနျဆနျစှာဝငျရောကျမှုပွုလုပျနိုငျစဖေို့အတှကျအရေးပါပါ တယျ။ သင့ျရဲ့လုပျငနျးဟာ Cloud ပေါျတှငျသိမျးဆညျးထားတဲ့ သတငျးအခကြျအလကျမြားကို သင့ျရဲ့ software-as-a-service (SaaS) tool မြားနဲ့ အခွားသော platform မြားပေါျမှတဆင့ျဝငျရောကျမှု ပွုလုပျရာတှငျပိုမိုမွနျဆနျလာတဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုရရှိမှာဖွဈပွီး သင့ျရဲ့ Customer Service ကိုယျစားလှယျမြားအနနေဲ့ ဖောကျသယျဖွဈလာနိုငျသူမြား (သို့) ဖောကျသယျမြားနဲ့ဆကျဆံရာတှငျ နှောင့ျနှေးမှုမြားဖွဈပေါျတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ လုပျငနျးမြားဟာသူတို့ရဲ့ဝနျဆောငျမှုမြားကို cloud ပေါျသို့ရှှေ့ပွောငျးမှုပွုလုပျလာသညျနှင့ျအမြှ fiber-optic အငျတာနကျဟာ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အရာ တဈခုဖွဈလို့လာနပေါတယျ။
Fiber Internet ဝနျဆောငျမှုမြားဟာ Copper Internet ဝနျဆောငျမှုမြားနဲ့နှိုငျးစာလြှငျ သိသာစှာ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့အားသာခကြျမြားရှိနပေါတယျ။ Fiber ဟာ Copper ထကျပိုမိုပွီးခိုငျမာမှုရှိ တဲ့အတှကျ Fiber-optic အငျတာနကျဟာ Copper cabling မြားတှငျကဲ့သို့ ရာသီဥတုအခွအေနေ မြားကွောင့ျ ဒတောပေးပို့မှုမြားကိုပကြျစီးထိခိုကျစေ (သို့) နှောင့ျနှေးစခွေငျးတို့လညျးမဖွဈနိုငျပါဘူး။ Fiber ဟာ လူသားမြားရဲ့နှောင့ျယှကျမှုမြားနဲ့ လြှပျစီးကွောငျးမြားကွောင့ျ အနှောင့ျအယှကျဖွဈပေါျမှု မြားကိုလညျးခံနိုငျရညျရှိပွီး Fiber ကွိုးမြားကိုဖွတျတောကျမှုမပွုသရှေ့ ကောငျးမှနျစှာအလုပျလုပျ နိုငျပါတယျ။
ယုံကွညျစိတျခြ၍မရတဲ့အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုမြားဟာ လုပျငနျးမြားအတှကျ ဆုံးရှုံးရမှုမြားကိုဖွဈ စနေိုငျပါတယျ။ ကွိုတငျစီမံထားမှုမရှိဘဲ အငျတာနကျပွတျတောကျသှားခွငျးဟာ ဆကျသှယျပွောဆို မှုမြားနဲ့ကုနျထုတျလုပျမှုစှမျးရညျမြားကိုလုံးဝရပျတန့ျပဈလိုကျနိုငျပါတယျ။ သင့ျရဲ့ကုမ်ပဏီဟာ ဖုနျးခေါျ ဆိုမှုမြားပွုလုပျရနျ (သို့) application မြားသို့ဝငျရောကျနိုငျရနျအတှကျအငျတာနကျခြိတျဆကျမှုတဈ ခုကိုပွုလုပျရနျလိုအပျပါက ယုံကွညျစိတျခရြဖို့မှာ မရှိမဖွဈလိုအပျသောအရာတဈခုဖွဈပါသညျ။
DSL (သို့) Ethernet over Copper မြားကိုအသုံးပွုထားတဲ့သမားရိုးကြ Broadband အငျတာနကျ မြားတှငျ အသုံးပွုသူက switch မှ ဝေးကှာလာသညျနှင့ျအမြှ လိုငျးဆှဲအားမြားလြော့နညျးလာပါ သညျ။ Fiber-optic မြားရဲ့ လိုငျးဆှဲအားဟာတော့ အကှာအဝေးအလိုကျတဖွညျးဖွညျးလြော့ကြ သှားရာတှငျ အထကျဖောျပွပါလိုငျးမြားထကျနှေးကှေးပါတယျ။ ရုံးခနျးနရောကယြျဝနျးတဲ့လုပျငနျး မြားတှငျ လုပျငနျးတဈခုလုံးအတှငျး ကောငျးမှနျတဲ့လိုငျးစှဲအားမြားကိုရရှိနိုငျတဲံအားသာခကြျကို ရရှိ မှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအရာက telecommunications room မှပိုဝေးသောနရောတှငျရှိနတေဲ့ဝနျထမျး မြားအတှကျပိုမို၍အကြိုးရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
ဒတောအခကြျအလကျမြားကိုပေးပို့ဖို့လှနျစှာပွုလုပျရသည့ျလုပျငနျးမြားတှငျ Cable Internet Bandwidth ကိုအသုံးပွုလြှကျရှိပါက သတျမှတျပမာဏကိုမွနျဆနျစှာရောကျရှိသှားဖို့မှာ လှယျကူ လှပါတယျ။ လုပျငနျးမြားအတှကျ Fiber-optic အငျတာနကျဟာလညျး ရာနှုနျးပွည့ျ အကန့ျသတျမဲ့ ရရှိနိုငျတာမဟုတျသောျလညျး Bandwidth ရရှိနိုငျမှုပမာဏဟာ ပိုမိုမွင့ျမားလာပွီး ပိုမိုမြားပွားတဲ့ demand တှေ network ပေါျသို့ရောကျရှိလာသောျလညျး မွနျနှုနျးမှာလြော့ကသြှားမှုမဟုတျပါဘူး။
အောကျပါအခကြျမြားဟာတော့ လုပျငနျးမြားရဲ့ bandwidth ပေါျတှငျမွင့ျမားတဲ့ demand တှကေို ဖွဈပေါျလာနိုငျစပေါတယျ။
ရရှိနိုငျတဲ့ Bandwidth ပမာဏနညျးပါးခွငျးရဲ့လက်ခဏာမြားကတော့ မွနျနှုနျးလြော့ကခြွငျး၊ နှောင့ျ နှေးမှုမြားနှင့ျ ကောငျးမှနျသည့ျ video အရညျအသှေးမရှိခွငျးတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍သငျလကျရှိအသုံးပွုနတေဲ့အငျတာနကျခြိတျဆကျမှုဟာသင့ျကုမ်ပဏီတှငျ အမှနျတကယျ လိုအပျနတေဲ့ bandwidth လိုအပျခကြျမြားကဲ့သို့သော SIP trunking မှတဆင့ျ တယျလီဖုနျးဝနျ‌ ဆောငျမှုမြား၊ ရုပျသံအစညျးအဝေးပှဲမြားပွုလုပျခွငျး (သို့) cloud application မြားသို့ဝငျရောကျ ခွငျး မြားအတှကျလုံလောကျမှုမရှိပါက သင့ျအနနေဲ့ fiber-optic အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုမြားကို ပွောငျးလဲအသုံးပွုခွငျးအားဖွင့ျ သိသိသာသာကိုအကြိုးဖွဈထှနျးစမှောဖွဈပါတယျ။
“Symmetric Speed“ ဆိုသညျမှာ ညီတူသော upload နှင့ျ download time မြားရှိတဲ့ အငျတာနကျ connection ကိုဖောျပွသည့ျအခါတှငျအသုံးပွုသည့ျအခေါျအဝေါျတဈခုဖွဈပါသညျ။ Fiber အငျတာ နကျနှင့ျဆိုပါကသင့ျရဲ့ဝနျထမျးမြားဟာ တူညီသော upload နဲ့ download time မြားရှိတဲ့အတှကျ အကြိုးဖွဈထှနျးစနေိုငျပါတယျ။
Symmetric speed ရှိနဖေို့မှာ မရှိမဖွဈလိုအပျပါသလား? ဒီအရာကလုပျငနျးမြားကိုလုပျဆောငျရာ တှငျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့အရာတဈခုမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယ့ျဒီအရာက အကြိုးရှိစပေါတယျ။ TechZine ရေးသားခဲ့တဲ့ဆောငျးပါးတဈပုဒျအရ symmetric speed မြားတှငျ တိုးတကျလာမှုဟာ “network မြားကိုအသုံးပွုသည့ျပုံစံ“ မြားတိုးတကျလာသညျကိုဖောျပွနပေါသညျ။ ယနေ့ခတျေဝနျ ထမျးမြားဟာ ယခငျဆယျစုနှဈမြားကဝနျထမျးမြားထကျ သူတို့အလုပျလုပျရာတှငျ Video မြား၊ ဖိုငျ မြားကို upload ပွုလုပျခွငျး (သို့) download ပွုလုပျနစေဉျအတှငျးဖုနျးခေါျဆိုမှုမြားပွုလုပျရခွငျး တို့ကိုပိုမိုပွီးပွုလုပျလာကွရပါတယျ။ Symmetric Speed ရှိခွငျးဟာ အသုံးပွုသူမြားကို သူတို့ရဲ့ ဒတောကှနျနကျရှငျမှတဆင့ျ ပမာဏမြားပွားသော upload နဲ့ download မြားကို တဈပွိုငျနကျပွု လုပျနိုငျစရေနျအတှကျ ဖွဈစနေိုငျပါသညျ။
Latency ဆိုသညျမှာ ဒတောအခကြျအလကျမြားကို အငျတာနကျဆကျသှယျမှုမှတဆင့ျ process ပွု လုပျရာတှငျဖွဈပေါျသည့ျကွာခြိနျကိုဖောျညှှနျးသည့ျအခါတှငျအသုံးပွုသည့ျအခေါျအဝေါျတဈခုဖွဈပါ တယျ။ Fiber-optic အငျတာနကျဟာ user မြားအနနေဲ့ cable internet ဥိုအသုံးပွုရာတှငျတှေ့ကွုံ ရနိုငျသည့ျ မြားစှာသော latency ပွူနာမြားကိုဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွင့ျ ဗှီဒီယို (သို့) အရညျအသှေးမွင့ျမားတဲ့ content တဈခုခုကို upload (သို့) download ပွုလုပျရာတှငျဖွဈပါ တယျ။ သင့ျရဲ့ latency ကိုလြှော့ခနြိုငျခွငျးအားဖွင့ျ ရရှိနိုငျတဲ့ လုပျငနျးစီးပှားရေးဆိုငျရာ အကြိုးရ လာဒျမြားကတော့
• VoIP အသုံးပွုသူမြားအတှကျပိုမိုကောငျးမှနျသည့ျအသံအရညျအသှေး
• Cloud ပေါျသို့ပိုမိုမြားပွားသော app မြားကိုပွောငျးရှှေ့နိုငျခွငျး
• အရှယျအစားကွီးမားသည့ျဖိုငျမြားကို အနှောင့ျအယှကျမရှိ download နှင့ျ upload ပွုလုပျနိုငျခွငျး
လုပျငနျးသုံး cable အငျတာနကျကို cable tapping (သို့) အခွားသော ရိုးရှငျးသည့ျနညျးစနဈမြားကို အသုံးပွုပွီး Hacker မြားနဲ့ သတငျးအခကြျအလကျခိုးယူသူမြားဟာအလှယျတကူဝငျရောကျနိုငျကွ ပါတယျ။ Fiber-optic အငျတာနကျကို ထှငျးဖောကျဝငျရောကျရနျတဈခုတညျးသောနညျးလမျးက တော့ Fiber မြားကိုဖွတျတောကျပဈဖို့သာဖွဈပွီး ဒီအရာက လိုငျးဆှဲအားမြားပြောကျသှားစမှောဖွဈ ပါတယျ။ Fiber-optic အငျတာနကျဟာ သင့ျရဲ့ကုမ်ပဏီကို cyber ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားရဲ့ရနျမှ ကာ ကှယျပေးနိုငျမယ့ျ အစှမျးထကျတဲ့နညျးလမျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
သတငျးအခကြျအလကျကြိုးပေါကျမှုမြားကွောင့ျဖွဈပေါျတတျတဲ့ အကြိုးဆကျမြားရဲ့ကုနျကစြား ရိတျဟာ အမရေိကနျဒေါျလာ 3.8 မီလီယံရှိပါတယျ။ ကာကှယျထိနျးသိမျးထားရမယ့ျသတငျးအခကြျ အလကျမြားပေါကျကွားသှားတဲ့ကုမ်ပဏီမြားဟာ ငှကွေေးဆိုငျရာအလြောျပေးရမှုမြားနဲ့ စားသုံးသူ မြားမှ စှန့ျခှာသှားမှုမြားကိုကွုံတှေ့ရတတျပါတယျ။ သတငျးမီဒီယာမြားဟာ ကုမ်ပဏီကွီးမြားတှငျဖွဈ ပှားလေ့ရှိတဲ့ high-profile လုံခွုံရေးကြိုးပေါကျမှုမြားကိုသာ အသားပေးဖောျပွတတျကွသောျ လညျး ကုမ်ပဏီတိုငျးဟာ တိုကျခိုကျခံရနိုငျပါတယျ။ Fiber-optic အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုသို့ပွောငျး လဲသုံးစှဲလိုကျခွငျးဟာ သင့ျလုပျငနျးအဖှဲ့အစညျးရဲ့ risk အားလုံးကိုလြော့နညျးသှားစမှောမဟုတျ သောျလညျး ဒီအရာဟာ အရေးပါတဲ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာကာကှယျမှုတဈရပျဖွဈပါတယျ။
၉။ အနှောင့ျအယှကျမြားကို ခံနိုငျရညျရှိခွငျး
Broadband ကို support ပေးထားတဲ့ Copper cable Internet ဟာ electromagnetic လှိုငျးမြား ရဲ့နှောင့ျယှကျဖကြျစီးမှုကိုခံနိုငျရညျမရှိပါဘူး။ ဒီအရာဟာ စကျပစ်စညျးကွီးတှနေဲ့နီးကပျမှုရှိတဲ့အခါ တှငျဖွဈပေါျနိုငျပါတယျ။ Fiber Internet signal မြားဟာတော့ electromagnetic လှိုငျးမြားရဲ့‌ နှောကျယှကျမှုကွောင့ျလြော့နညျးသှားခွငျး၊ ပြောကျကှယျသှားခွငျးမရှိပါဘူး။ အကယျ၍သင့ျရဲ့လုပျ ငနျးအဖှဲ့အစညျးဟာ telecommunication အခနျးကို အခွားသောုပျငနျးမြားနဲ့ မြှဝသေုံးစှဲနရေပါက Fiber-optic အငျတာနကျကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွင့ျ အခွားသောလုပျငနျးအဖှဲ့အစညျးမြားက တူညီ တဲ့နရောတဈခုတှငျရှိနတေဲ့ သင့ျရဲ့အငျတာနကျကှနျနကျရှငျကိုအနှောင့ျအယှကျဖွဈစနေိုငျတဲ့အရာမြား ကိုအသုံးပွုလြှကျရှိနရေငျတောငျမှ သင့ျရဲ့အငျတာနကျလိုငျးဆှဲအားမြား လြော့နညျးပြောကျကှယျ မသှားစရေနျအတှကျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ .
မွနျဆနျသောအငျတာနကျလိုငျးရှိနဖေို့ဟာ လုပျငနျးမြားအတှကျ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျကောငျးစေ ရနျအတှကျလိုအပျသည့ျ tool တဈခုအနနေဲ့ ပိုမို၍ကယြျပွန့ျစှာစဉျးစားလာကွပွီဖွဈပါတယျ။ အထကျကအခကြျမြားတှငျပွောကွားခဲ့ပွီးသည့ျအတိုငျး မွနျနှုနျးပွူနာမြားကိုဖွရှေငျးလိုကျခွငျး ဟာ နှဈတိုငျးနှဈတိုငျး တဈပတျစာပိုမို၍လုပျငနျးစှမျးဆောငျမှုနှုနျးကိုတိုးတကျလာစမှောဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍သင့ျရဲ့လုပျငနျးဟာ မွနေရောအနအေထားနဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနမြေားကွောင့ျ ယုံကွညျ စိတျခရြမှုမရှိတဲ့အငျတာနကျခြိတျဆကျမှုကွောင့ျအခကျတှေ့နတေယျဆိုပါက သင့ျအနနေဲ့နှဈတိုငျး ဒေါျလာထောငျပေါငျးမြားစှာဆုံးရှုံးနမှောဖွဈပါတယျ။ နှေးကှေးသော (သို့) ယုံကွညျစိတျခြ၍မရ သော cable အငျတာနကျကွောင့ျဖွဈပေါျနတေဲ့ လုပျငနျးစှမျးဆောငျရညျပွူနာမြားဟာ Fiber ကို အသုံးပွုလိုကျပါက ပြောကျကှယျသှားနိုငျပါတယျ။
ပိုမို၍အရေးကွီးတဲ့အခကြျတဈခုကတော့ သင့ျရဲ့လုပျငနျးဟာ fiber-optic အငျတာနကျခြိတျဆကျမှု ကိုအသုံးပွုပါကပွောငျးလှယျပွငျလှယျခွငျးနဲ့လိုအပျသလိုပွောငျးလဲလုပျဆောငျနိုငျခွငျးတို့ကိုလညျး ရရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍သငျနဲ့ သင့ျရဲ့ IT team ဟာ ပိုမိုမြားပွားတဲ့ application တှနေဲ့ ဝနျဆောငျမှုမြားကို Cloud ပေါျသို့ရှှေ့ပွောငျးနိုငျဖို့ကိုမြှောျလင့ျနတေယျဆိုရငျတော့ Fiber connection တဈခုဟာ ဒီနရောမြားတှငျ အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ Software-as-a-service (SaasS), cloud storage နှင့ျ VoIP မြားအားလုံးဟာ ကုနျကစြားရိတျမြားကိုလြှော့ခနြိုငျစေ ရနျအတှကျ ကွီးမားတဲ့အလားအလာရှိနတေဲ့ လုပျငနျးသုံးဝနျဆောငျမှုမြားဖွဈပွီး ထိုအရာမြားဟာ fiber အငျတာနကျကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွင့ျပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြားကို သိသိသာသာ ပေးစှမျးနိုငျစမှောဖွဈပါတယျ။
၁၁။ HD ဗှီဒီယိုမြားကိုအထောကျအပံ့ပေးနိုငျခွငျး
ကုမ်ပဏီပေါငျးမြားစှာအတှကျ teleconferenceing နှင့ျ video conferencing မြားဟာ ဝနျထမျးမြား ကိုလေ့ကငြ့ျပေးဖို့အတှကျ၊ marketing နဲ့ sales မြားပွုလုပျနိုငျရနျအတှကျ အရေးပါတဲ့ tool မြား ဖွဈကွပါတယျ။ Fiber-optic internet connection နဲ့သာဆိုလြှငျ ရရှိနတေဲ့ bandwidth ပမာဏ မြားကို မဆုံးရှုံးစပေဲ လုပျငနျးမြားဟာ video conferencing မြားတှငျ သူတို့ရဲ့ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြားကို လုပျငနျးသုံး အထောကျအကူပစ်စညျးတဈခုအနနေဲ့ ပိုမိုပွီးတိုးမွှင့ျလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လေ့လာမှု မြားမှဖောျပွခကြျအရ video conferencing တှငျပိုမိုပွီးရငျးနှီးမွှုပျနှံလာခွငျးဟာ ကုမ်ပဏီမြားကို ဝနျထမျးတဈဦးခွငျးစီအတှကျ တဈနှဈလြှငျသောျ၎င်းငျး၊ တဈလအတှငျးတှငျသောျ၎င်းငျး ကုနျကနြိုငျသည့ျ ဒေါျလာထောငျနဲ့ခြီတဲ့ကုနျကစြားရိတျမြားကိုလြှော့ခနြိုငျစမှောပဲဖွဈကာ သင့ျအနနေဲ့လိုအပျမှုမရှိတဲ့ လုပျငနျးကွောင့ျခရီးသှားလာရမှုမြားကိုလြှော့ခနြိုငျစမှောပဲဖွဈပါတယျ။
Fiber-Optic Internet ဝနျဆောငျမှုမြားကိုအသုံးပွုရသည့ျအတှကျရရှိလာနိုငျတဲ့ ဆိုးကြိုးမြားဟာ အဘယျနညျး?
Fiber-optic Internet ဝနျဆောငျမှုမြားကိုအသုံးပွုရခွငျးရဲ့ ဆိုးကြိုးမြားဟာ မရှိသလောကျနညျးပါ သောျလညျး ထိုအရာမြားတှငျ -
• စတငျတပျဆငျခြိနျတှငျ ငှကွေေးရငျးနှီးမွှုပျနှံရခွငျး
• ပိုမိုမွင့ျမားသော လစဉျဝနျဆောငျမှုနှုနျးထားမြား
Fiber အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုတပျဆငျရနျ ပိုမိုမွင့ျမားသောကုနျကစြားရိတျမြားနဲ့ ငှကွေေးအရရငျး နှီးမွှုပျနှံထားရမှုမြားရှိနသေောျလညျး လုပျငနျးအတောျမြားမြားကတော့ သူတို့အနနေဲ့ လုပျငနျးစှမျး ဆောငျရညျတိုးတကျလာခွငျးနဲ့ ဖွဈပေါျလာနိုငျတဲ့အကြိုးရလာဒျမြားကွောင့ျ မွင့ျမားတဲ့ ROI အခြိုး ကိုရရှိနိုငျတယျလို့ယူဆထားကွပါတယျ။
လုပျငနျးအရှယျအစားတိုငျးအတှကျ Fiber-Optic အငျတာနကျခြိတျဆကျမှုကွောင့ျရရှိလာနိုငျတဲ့ အကြိုးရလာဒျမြားအကွောငျးကိုပိုမိုပွီးသိရှိနိုငျရနျအတှကျ (သို့) ဈေးနှုနျးဖောျပွခကြျမြားကိုရရှိနိုငျ ရနျအတှကျ Burmainternet.com ကို ယခုပဲဆကျသှယျပွီး လုပျငနျးသုံးဆကျသှယျမှုဆိုငျရာကြှမျး ကငြျသူ consultant မြားနဲ့ စကားပွောကွည့ျလိုကျပါ။